Muuri News Network » Taabid oo Fursad u noqday albaabkii kooxaha mucaaradka ka soo geli lahaayan burburta Dowladda Farmaajo
Taabid oo Fursad u noqday albaabkii kooxaha mucaaradka ka soo geli lahaayan burburta Dowladda Farmaajo
Jan 10, 2018 - Comments off
Gudoomiyaha Gobalka Banaadir ahna Duqa Magaalada Muqdisho Taabit Cabdi Maxamed ayaa ka dalbaday Aqalka Sare ee Baarlamaanka Soomaaliya inay meel saaraan maqaamka siyaasadeed ee Gobolka Banaadir, xilii dhawaan laga baajiyay shir siyaasadeed uu Taabid soo abaabulay balse madaxda Dowladda Federaalka u arkeen shirkaas mid halis gelinaya siyaasadooda.
Taabid Cabdi oo olole siyaasadeed oo ka dhan ah Madaxweynaha iyo Ra’iisal Wasaaraha ka wado magaalada muqdisho isla markaana labadii maalmood la soo dhaafay la kulmayay Xildhibaanada beesha Mudullood iyo odayaasha dhaqanka kuna war gelinayay sida aysan madaxda Dowladda sida Madaxweynaha iyo Ra’iisal wasaaraha ugu caja jiidayan in wax ugu yeeray wadatashiga dadka muqdisho.
Isagoo ka hadlay xeritaanka kalfadiga Aqalka sare ayuu sheegay in 3 Milyan oo shacabka Muqdisho ah ay u baahan yihiin inay metelaad ku yeeshaan Aqalka sare ee Baarlamaanka, taasina laga sugayo inay xaqiijiyaan xildhibaannada Aqalka Sare.
Gudoomiyaha Gobalka Banaadir Taabit Cabdi Maxamed ayaa ka dalbaday Aqalka Sare ee Baarlamaanka Soomaaliya inay meel saaraan maqaamka siyaasadeed ee Gobolka Banaadir.
Maqaamka Muqdisho ayaa noqday mid dowladihii isaga danbeeyay dalka aanay ku guuleystan inay sharci u sameeyaan, maadama siyaasadda dalka aysan weli deganayn sidoo kalena dastuurka dalka uusan dhameystirinayn ayaa wax walba hakad galeen.
Laakin Duqa Muqdisho ayaa ololihiisa Siyaasadeed waxaa uu ku doonaya inuu iska horkeeno madaxda Dowladda Federaalka iyo beelaha magaalada muqdisho.
Jilitaankiisa Siyaasadeed ee ku doonayo inuu taageero kaga helo dadka muqdisho isagoo ka faa’ideysanaya ka maqnaanshaha xubnihii meteli lahaa caasimadda aqalka sare ayaa Taabid waxaa uu khilaaf hor leh ka dhex abuuraya Madaxweynaha iyo Xukuumadda.
Taabid oo markii hore awood badan ku lahaa xafiiska Madaxweyne Farmaajo ayaa wuxuu hadda u muuqdaa mid keligiisa ku ah dagaalkan cusub, waxaana muuqata in Madaxweynaha iyo Ra’iisal Wasaaraha ay fahamsan yihiin damaca qarsoon Taabid oo ka shidaal qaadanaya siyaasiyiin ka shaqeynaya burburinta Dowladda Soomaaliya.
Siyaasiyiinta mucaaradka ku ah Dowladda Madaxweyne Farmaajo ayaa u arka qorshaha Taabid midii ay uga taqalusi lahaayan Xukuumadda isla markaana Siyaasadda Madaxweynaha kaga dhigi lahaayan mid taag daran oo aan tabar buuran lahayn, waxayna hadda u sacab tumayaan Taabid, waana fursada ugu fiican oo kooxaha mucaaradka haystaan kuwaas oo muddo sanad ah raadinayan meel ay isaga horkeenan Farmaajo iyo Xukuumadda.